Ukuvalwa kweenwele zabantu zasePeruvia Soie Hair Atlanta Ukuvalwa kweenwele zabantu zasePeruvia Soie Hair Atlanta
Ukuvalwa kweenwele zabantu zasePeruvia Soie Hair Atlanta - Soie Virgin Hair Extensions
Ukuvalwa kweeNwele zoBuntu zasePeruvia
Izinwele ezilumkileyo zasePeruvia zinobukhulu obuphezulu, zibambe imibala kakuhle, kwaye zinokuphengulwa, zilubala, ziguqulwe, kunye nesitayela kaninzi ngaphandle kokulahlekelwa ukukhanya kwayo. Intloko yomntu nganye isuka kumnikeli omnye ukuqinisekisa ukulingana komgangatho wemveliso.
yethu I-Peruvian Straight VUkuvuselela Ubunwele Bobuntu are ezenziwe kuphela kwizinwele zobuntombi ezintle kakhulu. Izinwele ziza kugcina iminyaka ye-2 okanye ngaphezulu ngenxa yamandla angenangqondo yeentloko zezinwele kunye ne-cuticles.
AmaNotshi awagcini i-bleached (Buza malunga neenkcukacha ze-bleaching)